Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Cebu Pacific flying crew ngoku i-100% igonywe ngokupheleleyo
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • IiPhilippines News Breaking • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
I-Cebu Pacific flying crew ngoku i-100% igonyiwe.
I-CEB ibhiyozela esi siganeko sibalulekileyo njengoko bekucwangcisiwe, kwaye ngexesha lokunyuka okulindelweyo kwabakhweli kwiinyanga ezizayo, kulandela ukucuthwa kwezithintelo zokuhamba kwiiPhilippines.
Inkqubo ye-COVID Protect yinxalenye yenyathelo leQela leGokongwei kuwo onke amacandelo alo oshishino.
Bonke abasebenzi baseCebu Pacific ngoku bangama-98 ekhulwini bagonywe ngokupheleleyo.
I-Cebu Pacific izuze ukhuseleko lweenkwenkwezi ezi-7 ukusuka kwi-airlineratings.com ngokuthobela i-COVID-19.
Inqwelomoya enkulu kwiiPhilippines, ICebu Pacific, ifumene i-100% yezinga lokugonywa kwiqela layo elisebenzayo lokubhabha ngenkqubo yayo yokugonya abasebenzi, i-COVID Protect, kunye nobudlelwane obahlukeneyo kunye nee-LGUs elizweni.
“Kuyasivuyisa kakhulu ukwabelana ngezi ndaba naye wonke umntu njengoko silungiselela ukuqinisa uthungelwano lwethu lwasekhaya ukuze sihlangabezane nemfuno yohambo engekapheli. ICebu Pacific iyaqhubeka nokomeleza imigaqo yokhuseleko kwaye siyazi ukuba nabasebenzi abagonywe ngokupheleleyo kuya komeleza ukuthenjwa kunye nokuzithemba koluntu ekuhambeni ngenqwelomoya, utshilo uFelix Lopez, uSekela Mongameli weSebe labantu. ICebu Pacific.
Inkqubo ye-COVID Protect yinxalenye ye Gokongwei GroupInyathelo lokuqala kuzo zonke iiyunithi zayo zoshishino. Ngale nto, abasebenzi beCEB bafumana ngokugonywa simahla bona kunye nabo baxhomekeke kubo, kunye nabasebenzi beqela lesithathu, njengee-arhente zokungena kunye nabaphethe iibhegi.
Ngaphandle kwale nkqubo ikhokelwa yimbumba yamanyama, i-CEB iphinde yasebenzisana kunye neeyunithi ezahlukeneyo zorhulumente wasekhaya kwezi nyanga zidlulileyo ukuqinisekisa ukuba abasebenzi bayo baya kugonywa ngalo naluphi na ugonyo olukhoyo, kwangethuba.
“Siyabancoma abaqhubi beenqwelo-moya kunye nabasebenzi bethu ngokugonywa ngokuzithandela, kungekuphela nje ukuzikhusela bona neentsapho zabo, kodwa nabakhweli abahamba nabo. Sikwavakalisa umbulelo wethu kwiinkokeli zethu kwi Gokongwei Group ngokukhokela inkqubo yokugonywa, kwaye ngokuqinisekileyo, amaqabane ethu karhulumente ngokuqaphela icandelo lezothutho njengeqela eliphambili, "kusho uCapt. Sam Avila, uSekela Mongameli weMisebenzi yeFlight eCebu Pacific.
Bonke abasebenzi baseCebu Pacific ngoku bangama-98% bagonywe ngokupheleleyo. Njengomlingane wokuqala wenqwelomoya kwinyathelo le-Ingat-Angat, kwaye njengomxhasi ophambili wokwakha isizwe, i-CEB ibisoloko ithutha izitofu zokugonya ukusuka phesheya ukuya kwiiPhilippines, nakwilizwe liphela ukusukela ngoMatshi walo nyaka. Ukuza kuthi ga ngoku, inqwelomoya ikhuphe ngokukhuselekileyo i-16.5 yezigidi zeedosi zokugonya ukusuka e-China ukuya kwiiPhilippines, kwaye kufutshane ne-25 yezigidi zeedosi zokugonya kwiindawo ezingama-28 zasekhaya.
I-CEB izuze ukhuseleko lweenkwenkwezi ezisi-7 kwi-airlineratings.com ngokuthobela i-COVID-19. Iyaqhubeka nokuphumeza indlela enemigangatho emininzi yokhuseleko njengoko izama ukubuyisela intembeko yoluntu kuhambo ngenqwelomoya.
I-CEB isebenza ngeyona nethiwekhi yasekhaya ibanzi kwiiPhilippines egubungela iindawo ezingama-32, ngaphezulu kweendawo zayo ezisibhozo (8) zokuya kumazwe ngamazwe. Iinqanawa zayo ezingama-73 ezomeleleyo, enye yezona zincinci emhlabeni, ibandakanya ezimbini (2) ezizinikeleyo zokuthutha i-ATR kunye nenye (1) ye-A330 yothutho.